Daadadka Roobka oo kala Xiray isku Socodkii Magaalooyinka Qaar – Radio Daljir
Maajo 14, 2017 2:49 b 1
Waxaa maalintii labaad sii galaya hakadkii ku yimid isku socodkii dadka iyo gaadiidka ee qaar ka mid magaalooyinka Puntland kadib markii roobab mahigaan ay ka da’een qayb ahaan gobolada Puntland.
Roobabka ugu badan ayaa 24 saac ee ugu dambeeyey ka hooray gobollada Mudug iyo Nugaal ee Puntland, roobabkaasi oo ay ka soo rogmadeen mawjado biyo ah oo buux-dhaafshay togogga iyo iliilaha biyuhu jibaaxaan, kuwaasi oo kala xiray guud ahaanba isku socodkii labadaasi gobol min tuulo, degmo illaa caasumad.
Waddada laamiga ah ee isu xirta inta badan gobollada Puntland, siiba inta u dhaxaysa Mudug iyo Nugaal ayaa badankeeda waxaa dulmaray, qariyeyna daadadkii ka soo burqaday roobabkii da’ayey saacadaha badan ee xiriirka ah, waxaana aad u adag in aad kala soocdid jidkii laamiga ahaa iyo bannaankii xoolo daaqeenka ahaa, kadib markii biyuhu joog sare tageen, ballina u ekaaday laamigii iyo dhulkii kale ee caadiga ahaaba.
Magaalo walba oo u dhaxaysa labaasi gobol casumadahooda wax gaadiid ah kama bixin maanta iyo shalay, waxaana koontaroollada lagu celinyaa gaadiidka raba in ay magaalooyinkaas u kala safraan si looga hortago khatarta ka imaan karta.
Xawliga biyaha soo rogmaday, kuna butaacay bannaan iyo buundaba ayaa aad looga cabsi qabaa in ay waxyeeleeyaan laamiga dheer ee isku xira inta badan gobollada Puntland.
Dad iyo gaadiid ka kala safray magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo iyo magaalooyinka u dhaxeeya ayaa ku xayirmay masaafooyin kala duwan kadib markii ay daadad ka horyimaadeen, iyaga oo dhinaca kalena awoodi waayey in ay dib ugu laabtaan deegaannadii ay markii hore ka soo baxeen, daadad gadaashood soo rogmasay dartood.
Marka la fiiriyo xawliga biyuhu ku socdaan, kuna marayaan buundooyinka laamiga, dusha sare ee laamiga, iyo dhulka bannaanka ahba, sidoo kalena la eego saacadaha badan ee ay socdaan, welina aan awooddoodii wax iska baddelin waxaa qiyaasayaa maalmo kale oo dheeraad ah in ah socon doonaan, ayna sii socon karto kala xirnaanta magaalooyinka ku yaalla inta u dhaxaysa Galkacyo iyo Garowe.
daljir ku xirnow mar walba iyo meel walba oo ad calamka ka joogtaan